Momba anay - Huaian ASN Medical technology Co., Ltd.
Izahay dia mpanamboatra manavao izay manampahaizana manokana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary fivarotana vokatra. Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2012. Hatramin'ny nananganana azy dia niara-niasa tamin'ny oniversite sy oniversite izy mba hamakivaky ny teknolojia amin'ny sehatry ny plastika orthopedic amin'ny alàlan'ny fifangaroana akaiky amin'ny famokarana, fandalinana ary fikarohana.
Taorian'ny ezaka an-taonany maro, Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. dia lasa mpanamboatra kilasy voalohan'ny Orthopaedic Casting tape sy fantsona eto amin'ny firenena. Manaraka hatrany ny politikan'ny kalitaon'ny famolavolana fatratra, famokarana feno, fanompoana be zotom-po, fiezahana ho an'ny kilasy voalohany, hampiroborobo ny fampandrosoana amin'ny teknolojia. Manaraka hatrany ny filozofia momba ny fahatsoram-po sy ny fahatokisana ary ny fandresena eo amin'ny mpampiantrano sy ny mpanjifa izahay. Izahay dia mihevitra ny kalitao ho toy ny fiainan'ny orinasa, ary mamerina ny fiarahamonina miaraka amin'ny vokatra avo lenta amin'ny vidiny ambany. Miverena amin'ny mpampiasa!
Manana patanty 15 an'ny tenany ny orinasa ary manambara ho an'ny orinasa teknolojia avo lenta.
Manana mari-pahaizana ISO 13485 rafitra izahay, fanamarinana EU CE, fanamarinana an'ny US US ary mandray anjara amin'ny varotra varotra maro any an-trano sy any ivelany isan-taona.
Ny orinasanay dia mamokatra vokatra misy patanty indrindra toy ny orthopedic Casting tape, kasety fanamboarana, ary kasety fiarovana ny fantsom-petrolika. Nanafatra fitaovana sy fitaovana izahay ary nanamboatra vokatra vaovao tsy tapaka. Ny vokatr'ilay orinasa dia aondrana any amin'ny firenena maherin'ny 20 ao anatin'izany i Etazonia, Kanada, Alemana, Grande-Bretagne, Italia, Egypte ary India. Eo amin'ny lalan'ny fampandrosoana ho avy, ny orinasa dia manaraka ny fomba fanomezana ny mpanjifa vokatra tsara indrindra, manantanteraka ny vokatra sy ny serivisy ary mamaly ny mpanjifa vaovao sy taloha.
Nandray anjara tamin'ny fampirantiana iraisam-pirenena maro izahay. Azonao atao ny manamarina ny mombamomba ireo fampirantiana izay noraisinay teo aloha.